ထို့အပြင် lohikeyto အဖြစ်လူသိများအနီရောင်ငါးနှင့်အတူဂန္ဖင်လန် creamy ဟင်းချို, မည်သည့်ရိုးရာဟင်းလိုပဲသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှု၏ရှည်လျားသောသမိုင်း, မူကွဲ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကကြီးထွားနိုင်ခဲ့သည်။ အောက်ကချက်ပြုတ်နည်းများကျနော်တို့ဖင်လန်ပူဟင်းလျာများ၏ဂန္ဗားရှင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ, အဲဒီနောက်သူကအနက်ခေတ်မီ။
သံလွင်ဆီ - 45 ml ကို;
leek (အဖြူအစိတ်အပိုင်း) - 1 pc; ။
ရေ - 780 ml ကို;
အာလူး - 380 ဂရမ်;
ဆော်လမွန်ငါးတန်း - 380 ဂရမ်;
မုန့် - 380 ml ကို;
ကစီဓါတ်ပါ -4ဂရမ်,
ထောပတ် - '15
ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, အပူသံလွင်ဆီ, ကဖြောင့်ဟင်းချိုချက်ပြုတ်တံ့သောဒယ်အိုးထဲမှာပျော့သည်အထိ leek passeruem ။ တဦးတည်းရှိလျှင်, ရေသို့မဟုတ်ငါးဟင်းရည်အဆင်သင့်နှင့်အတူကြက်သွန်နီဖြည့်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, မွှေး Laurel အရွက်နှင့်အတူဖြည့်ဆည်းရပါမည်။ ပွက်ပွက်ဆူနေသောပြီးနောက်ရေ Cube အတွက်အာလူးထည့်သွင်းခြင်းနှင့်မီးလျော့။ တစ်ဦးအဖုံးနှင့်အတူဒယ်အိုးအဖုံးဖုံးနှင့်အာလူးပျော့ပျောင်းနေကြသည်သည်အထိစောင့်ပါ။ ဥနူးညံ့သောအခါ, အရေပြားအရိုးထဲကနေသူတို့ကိုကယျတငျတျောမူကွောငျးကိုသေချာအောင်, ငါးလွှာသည်အပိုင်းပိုင်းတစ်ဟင်းချို၌ထား၏။ အအေးမုန့်အတွက်ကစီဓါတ်ပါမှေးမှိန်ပြီးဟင်းချိုအတွက်အဖြေကိုလောင်း။ ဖင်လန်အတွက်မုန်ဟင်းချိုနှင့်မုန့်ထူ, နောက်ဆုံးပန်းကန်အဖြည့်အချပ်ထောပတ်, သံပုရာဖျော်ရည်ဇီယာစေ့သည်အထိ varitcya နှင့်မုန့်သို့မဟုတ် crackers နှင့်အတူစားပွဲမှတာဝန်ထမ်းဆောင်သငျ့သညျ။
ခေတ်သစ်ဟင်းချိုဗားရှင်းကိုအသုံးပြုပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး, ဒါပေမယ့်လည်းလုံးဝကွဲပြားခြားနားသော technique ကိုသာပါဝင်သည်။ ယခုဟင်းချို၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်း - မဟင်းရည်။ နှင့် creamy အရောအနှောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူအရည် Blender ကြာပွတ်။
ထောပတ် - 45 ဂရမ်,
အဖြူကြက်သွန် - 90 ဂရမ်,
စမုန်နက် - 60 ဂရမ်,
ဆလရီ (ပင်စည်) - 60 ဂရမ်,
ကြက်သွန်ဖြူ -4လေးညှင်းပွင့;
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ပန်းစည်း (Laurel, parsley ရိုး, ပင်စိမ်း, စမုန်ဖြူ);
ဆလရီအမြစ် - 300 ဂရမ်;
အာလူး - 110 ဂရမ်;
မုန့် - 130 ml ကို;
ငါးဟင်းရည် - 1, L;
ဆော်လမွန် (ဖုတ်) ၏အပိုင်းပိုင်း - 290 ဂရမ်
စမုန်နက်နှင့်ဆလရီလိုက်သည်ကိုအရည်ကျိုထောပတ်ကြော်ကြက်သွန်နီတွင်။ 6-7 ပြီးနောက်မိနစ်ကြက်သွန်ဖြူနဲ့မွှေးသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏တစ်စီး၏ pyurirovannye လေးညှင်းပွင့ zazharki မှထည့်ပါ။ zazharku ဟင်းရည်ဖြည့်ပါနဲ့ပြုတ်ဖို့အရည်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ပွက်ပွက်ဆူနေသောပြီးနောက်, ထို့နောက်ဟင်းချို Blender whisk, သူတို့ကနူးညံ့သောအထိစောင့်ဆိုင်း, အာလူး Cube နှင့်ဆလရီ၏ဟင်းရည်အတွက်ထားတော်မူ၏။ အပူပန်းကန်ကိုထပ်, အမုန့်လောင်းနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဆော်လမွန်၏မုန့်ဝတ်ပြုကြလော့။
လွယ်ကူသောချက်ပြုတ် - အီတလီတွင်မုန့်နှင့်ဟင်းချို
အဆိုပါ couscous ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Minestrone - စာရွက်
ကြက်ဆင်၏ Escalope - စာရွက်
Chanterelles နှင့်အတူ risotto
ပီဇာ4ဒိန်ခဲ - စာရွက်
ချိန်းကဒ်ကိုယ်ဝန်ရှိ - အခါပြဿနာ?
ရေချိုးခန်းအတွင်းကုလားကာ - ပုံကိုမိမိတို့အဘို့ကိုအကောင်းဆုံး option ကိုရွေးချယ်ဖို့?
မင်းသမီး Emma Stone သူမကရုပ်ရှင် ", La La မြေ" တွင်ကသူမ၏သူရဲကောင်းနှင့်အတူဘုံထဲမှာရှိပါတယ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောသည်
အသား multivarka နှင့်အတူ Buckwheat
ဂျေမီ Mazur Alessandra Ambrosio အတူတက်ခြိုးဖောကျပြီးနောက်သူမအသစ်ကရည်းစားနှင့်အတူအများပြည်သူ၌ထငျရှား
အများဆုံးအလွန်အမင်း paid အလုပ်အကိုင်
ငရုတ်သီး - အန္တရာယ်နှင့်အကျိုးအမြတ်
ရေချိုးခန်းအတွင်းမှို - သင်ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ပြီးပေါ်ပေါက်ရေးကာကွယ်တားဆီးဖို့ဘာလဲ?
အဆိုပါနှစ်တွင်စောင့်တပ်ဖွဲ့နှင့်မီဒီယာနီးပါးဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II ကို "ဦးသေဆုံးပြီး" ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ
Randy Gerber ကလေးများစုံတွဲ Clooney: "သူတို့ကထည့်သွင်း features နဲ့ Amal ရှိသည်, ဂျော့ခ်ျ"
မင်းသမီးဒိုင်ယာနာနှင့်နှလုံးခွဲစိတ်ဆရာဝန် Hasnat Khan က